COVID gburu Ekundo! Aloha nye Ọdụm Africa na Waikiki
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » COVID gburu Ekundo! Aloha nye Ọdụm Africa na Waikiki
Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
COVID gburu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ ise kemgbe ọ ghọrọ ọrịa na mbido 5.
Ọtụtụ mgbe echefuru echefu bụ ọtụtụ anụmanụ na -anwụ na COVID. Otu bụ Ekundo, ọdụm Afrịka nke bi na Zolụ Honolulu dị na Waikiki, na ọkacha mmasị maka ndị ọbịa ruo ọtụtụ afọ ilele.
Onye isi obodo Honolulu Rick Blangiardi kwupụtara ọnwụ nke ọdụm dị afọ 13.
Ọdụm ahụ nwụrụ na ọnọdụ ahụike na Mọnde na Ogige Honolulu ke Waikiki
Ma Ekundu na ọdụm nwanyị dị afọ 12, Moxy, buru ụzọ gosipụta akara nke ọrịa iku ume elu na ụfọdụ ụkwara na Mọnde, Ọkt. 4, 2021.
Anakọtara ọdụm ozugbo na ọdụm abụọ iji nwalee SARS-CoV-2, nje na-ebute COVID-19 n'ime mmadụ.
Ekundu, onye a na -agwọ ọrịa akwụkwụ ihe karịrị afọ ise, malitere ịrịa ọrịa ruo mgbe ọ kwụsịrị iri nri. Ozugbo ọ nweghị ike ịnata ọgwụ nkwado ya na nri, ndị otu anụmanụ na anụ ụlọ na -ahụ maka nlekọta anụmanụ kpebiri ime anesthetize ka ọ nye ọgwụgwọ dịka ọgwụ nje, ọgwụgwọ mmiri mmiri, na ọgwụ ndị ọzọ iji nyere ya aka inwe ahụ iru ala. N'otu oge ahụ, enwere ike ịnakọta ihe nlele akọwapụtara nke ọma maka nyocha ọzọ nke ihe ndị ọzọ nwere ike ibute ọrịa iku ume ya. Egburu ihe mgbaàmà iku ume elu Ekundu na nzaghachi nke ọgwụgwọ, mana ọ malitere igosipụta ihe mgbaàmà nke ọrịa iku ume ala na -esikwu ike iku ume n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ. N'agbanyeghi nlekota elekere na elekere ma na-aga n'ihu na-agwọ ya, Ekundu nwụrụ otu izu ka ebuputachara akara ya na mbụ.
N'ihi ule a na-eme n'ụlọ nyocha nke ala, nsonaazụ na-ekpughe ọdụm abụọ ahụ dị mma maka SARS-CoV-2 bụ naanị mgbe Ekundu gafere. Na atụmanya njikọ COVID, ndị ọrụ nlekọta anụ ụlọ guzobere ọgwụgwọ na usoro biohazard kwekọrọ n'ihe ụlọ zoos ndị ọzọ AZA kwadoro na nzaghachi na ntiwapụ SARS-CoV-2 gburugburu mba ahụ. Jill Yoshicedo, onye na-ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ, kwuru na “ọ bụ ezie na ọtụtụ ọrịa SARS-CoV-2 na nwamba buru ibu na-abụghị anụ ụlọ bụ ọrịa dị nro na-anabata ọgwụgwọ nkwado nke ọma, Ekundu bụ, ọ dị nwute, otu n'ime ikpe ọhụrụ ebe ọ dị ka COVID nwere njikọ na oke. oyi baa na mfu ndụ dị egwu na ụdị ndị a. ”
The zoo ugbu a na-eche nnwale nnwale maka SARS-CoV-2 yana nsonaazụ ọrịa nke ga-enyere aka chọpụta oke ọrụ nje nje rụrụ na ọnwụ ya. Ọ bụ ezie na mgbaàmà Moxy yiri ka ọ na -ebelata ngwa ngwa, ndị ọrụ ji nlezianya na -enyocha ma na -aga n'ihu na -enye ya nlekọta na ọgwụgwọ nkwado. Ọnọdụ Moxy yiri ka ọ kwụsiri ike ugbu a yana n'ụzọ na -agbake.
Amabeghị ihe kpatara ọrịa ọdụm ndị a. A na -agba ndị ọrụ niile nọ nso na ọdụm ọgwụ mgbochi ma na -erube isi n'iwu ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị ọrụ obodo. A nwalere ha maka COVID-19 wee chọpụta na ha adịghị mma. Ndị ọrụ Zoo na -aga n'ihu na -eme usoro biohazard siri ike iji gbochie mgbasa nke nje na mpaghara anụmanụ ndị ọzọ.
Onye isi ụlọ ebe a na -elekọta anụ ụlọ Santos kwuru, "Ana m aja ndị ọrụ nlekọta anụ ụlọ na ndị na -elekọta anyị mma maka mbọ ha na -elekọta Ekundu. Dị ka naanị ọdụm nọ na Zolọnụ Honolulu, Ekundu bụ onye a hụrụ n'anya na onye na -ese ihe. Zoo ohana nwere mwute nke ukwuu maka ọnwụ ya, ma na -arụkọ ọrụ ọnụ ka anyị lekwasị anya na ahụike na ọdịmma nke Moxy, yana ilekọta anụmanụ anyị ndị ọzọ nọ na zoo. ” Santos gara n'ihu kwuo, "Dika ụmụ anụmanụ nwere ike ibute COVID-19 site na mmadụ, a na-echetara ndị ọrụ anyị ka ha na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu ọ bụla na ịgbaso usoro iji chebe anụmanụ anyị. Anyị ga-achọkwa iji ohere a chetara ndị ọbịa niile na-eleta anụ ụlọ ka ha kpuchie nkpuchi na mpaghara anụmanụ nwere ihe ize ndụ zoonotic nke gụnyere primates, nwamba, nkịta, na anụ ụlọ. ”
A mụrụ Ekundu na Nọvemba 2, 2007, wee bịa na Honolulu Zoo na 2010. Ya na onye òtù ọlụlụ ya, Moxy, zụlitere ụmụ ọdụm atọ nke ebuferela na zoos ndị ọzọ dị ka akụkụ nke Association nke Zoos na Aquarium's (AZA). Atụmatụ nlanarị. Ọdụm ndị Africa na-adịkarị ndụ ruo afọ 15-25 na ndọrọ n'agha.